Abaninzi abanamakholwa kunye nabangakholwayo kwiintlobo ezahlukahlukeneyo bavame ukujonga inkolo nenzululwazi ngokungqinelaniyo. Oku kuhambelanisiweyo kukwacatshuliswa ukuba kwandiswe kulwalamano phakathi kwenkolo kunye neteknoloji, kuba iteknoloji yinto yemveliso yesayensi kunye nesayensi ayikwazi ukuqhubeka ngaphandle kobugcisa, ngakumbi namhlanje. Ngaloo ndlela bambalwa abakholelwa kuThixo abangamangaliseki ukuba bangaphi iinjineli nabadali bezendalo kunye nokuba bangaphi abantu kwiinkampani zobuchwephesha obuphezulu babonisa izizathu zonqulo ezinamandla.
Ukuxuba iTeknoloji kunye Nenkolo
Kutheni sifaka ubungqina bekhono lobugcisa kunye nexesha elifanayo ukuhlaziywa kwehlabathi kunokwenyaniso? Akufanele sicinge ukuba ukunyuka kokubili kubangele nje. Esikhundleni sokucinga ukuba imfundo noqeqesho emva kwezesayensi kunye ne-teknoloji kufuneka kuhlale zikhokelela ekukholweni kwenkolo nangakumbi ukukholelwa kuThixo , simele sizibuze ukuba mhlawumbi ukubonwa kwemibono kuqinisekisile iimbono zethu.
Abantu abangakholelwa kuThixo bahlala bekulungele ukugxeka ama- theist ngenxa yokungakwazi ukujongana nobungqina obungahlangabezananga nokulindela, ngoko masingayi kuloo mgibe.
Mhlawumbi kukho iinjongo zezenkolo ezigxininisa ukuqhutyelwa kwetheknoloji eyaziwayo namhlanje-ezinokwenkolo ezingathintela abantu abangakholelwa kuThixo, nabo, ukuba abaziqondi ngokwaneleyo ukuba bayibone oko kwenzekayo.
Iinjongo ezinjalo zinokuthintela iteknoloji kunye nenkolo ukuba ingahambelani. Mhlawumbi iteknoloji ngokwayo iyinkolo ngokwayo, ngokunjalo iyakususa nokungahambelani.
Zomabini iziganeko kufuneka zihlolwe kwaye ndicinga ukuba zombini zenzeke kumazinga ahlukeneyo. Enyanisweni, ndicinga ukuba zombini zenzeke kwiminyaka emininzi, kodwa iziseko zonqulo ezicacileyo zokuqhubela phambili kwezobuchwepheshe zinyanzelwanga okanye zifihliwe njengezihlobo ezihlazo.
Intshiseko abaninzi abantu abaye baba nayo iteknoloji kaninzi ixhomekeke - ngamanye amaxesha ayengazi - kwiinkolelo zonqulo kunye namaphupha endulo. Oku kubi ngenxa yokuba iteknoloji ibonakalisile ngokwayo inokubangela iingxaki ezinzima ebantwini, kwaye esinye sezizathu zezi zinto zingabangela ukuba abantu banganaki.
I-teknoloji, njengesazinzululwazi, ngumqondiso ocacileyo wexesha lanamhlanje kwaye ukuba ikamva kukuphucula, izakhiwo ezithile zomhlaba ziya kufuneka zichongwe, zivunywe, kwaye zithemba ukuba zizacinywa.
Utshintsho lwezenkolo kunye nezobuchwepheshe
Isitshixo kuzo zonke izinto ezigqithisileyo . Isithembiso sokudlulela kwendalo, imizimba yethu, ubunzima bethu bomntu, ubomi bethu, ukufa kwethu, imbali yethu, njl. Nxalenye ebalulekileyo yenkolo edlalwa ngokucacileyo. Oku kuhamba ngaphaya koyiko olufanayo lokufa kunye nomnqweno wokuwunqoba kwaye kubangele ukunganyaniseki konke esikuyo kumzamo wokuba yinto enye.
Kwiminyaka eyinkulungwane kwenkcubeko yeNtshona, ukuqhubela phambili kwezobugcisa obuchwepheni - iteknoloji - iphefumlelwe yiminqweno enzulu yenkcubeko yokungahambisani nokuhlengwa. Nangona ngoku ifihliwe ngolu hlobo lweelwimi kunye neengcamango, ukuhlaziywa kwenkcubeko yexesha elifanayo, nokuba yinto engqongqo, kunye ne-hand-in-hand ne-teknoloji, ngoko ke akusiyo into eyenzekayo kodwa yinto yokuvuselela inkcubeko ekhohliweyo.
Ukuba awuqapheli kwaye uyayiqonda indlela ukunyuka kwezenkolo kunye nezobuchwephesha kuye kwaphuhlisana kunye, awuyi kuphinda ubalekise ngempumelelo - kakhulu ngaphantsi xa beyakhula ngaphakathi kwakho.
Ixesha leNzululwazi kunye neNkolo ephakathi
Iprojekthi yophuhliso lwezobuchwepheshe ayikho uphuhliso lwangoku; Iingcambu zaso zingalandelwa kuma-Middle Ages - kwaye zilapha apha ukuba ikhonkco phakathi kwetheknoloji nenkolo iyaqhubeka. I-teknoloji yaqatshelwa ngokukodwa ngokugqithiseleyo kwamaKristu ngelizwi lesono kunye nokuhlengwa kobuKristu kwisimo somntu eswelekile.
Ekuqaleni kwenkqubo yamaKristu, akukho njengaye. wabhala kwisiXeko sikaThixo esithi "ngokungafani nazo zobugcisa obungaphilileyo bokuphila ngobubele kwaye ufikelele ekufeni okungafi," akukho nto abantu abangayenzayo inokunikela naluphi na uhlobo lovulo lobomi obugwetywe buhlungu.
Ubugcisa bobugcisa, kungakhathaliseki ukuba bephambili kangakanani, bekho kuphela ukubanceda abantu abawileyo kwaye akukho nto. Ukuhlengwa kunye nokugqithiselwa kunokufezekiswa kuphela ngoBomi bukaThixo obungabonakaliyo.
Oku kwaqala ukutshintsha kwi-Ages Middle Ages. Nangona isizathu esingaqinisekanga, umbhali-mlando uLynn White ucebise ukuba ukufakwa kwesimilo esinzima ekupheleni kwekhulu le-8 kwiYurophu yaseNtshona kunokuba negalelo. Siyazijwayele kwiingcamango zokulawulwa komntu wendalo, kodwa kufuneka sikhunjuzwe ukuba abantu abazange bahlale bebona izinto ngale ndlela. KwiGenesis , umntu wayenikwe igunya phezu kwehlabathi lezendalo, kodwa wenza isono waza walahlekelwa, kwaye emva koko wayedinga indlela yakhe "ngesithukuthelo sakhe."
Ngokuncedisa iteknoloji, nangona kunjalo, abantu banokubuyisela ezinye zezolawulo kunye nokufezekisa izinto awazange abe nazo yodwa. Esikhundleni seNdalo sihlala sisinye kwisintu, ngoko kuthetha, ubudlelwane obuphakathi kobuntu kunye neNdalo babuyiselwa - amandla omatshini ukwenza umsebenzi waba ngumgangatho omtsha, evumela abantu ukuba baxhaphaze oko babenakho. Umlimi onzima ungabonakali njengento enkulu, kodwa kwakuyinyathelo yokuqala kunye ebalulekileyo kwinkqubo.
Emva koko, oomatshini kunye nobugcisa bezobugcisa baqala ukubonakaliswa ekukhanyeni kwamakholenda, ngokuchasene nokusetyenziswa kwangaphambili kwemifanekiso yokomoya. Ezinye izibonakaliso zibonisa ukuphuhliswa kwezobuchwepheshe ekuncedeni imikhosi yolungisa kaThixo ngelixa ukuchaswa okubi kukubonakaliswa njengobuncaphephe kwezobuchwepheshe.
Kungaba apha ukuba sibone i-tendrils zokuqala zokuguquka kwesimo sengqondo kubamba kwaye iteknoloji iba yinto ebalulekileyo yobuKristu.
Kulula nje: okokulungileyo nokuvelisa ebomini kwaqatshelwa kwinkqubo yezenkolo.
Iimpembelelo eziphambili emva kokuchongwa kwenkolo kunye neteknoloji kwakuyi-oda ye-monastic, apho umsebenzi wawusele usebenza ngenye indlela yokuthandaza kunye nokunqula. Oku kwakuyinyani ngokukodwa kwiimonki zaseBenedictine. Ngenkulungwane yesithandathu, ubugcisa obusebenzayo kunye neengqesho zabasebenzi zazifundiswa njengezinto ezibalulekileyo zokuzinikela kwamasonto. Injongo ngamaxesha onke kwakufuna ukuphelela; Umsebenzi wezandla wawungapheli ngokwalo kodwa wayehlala wenza ngezizathu zokomoya. Ubugcisa bobuchwephesha - iteknoloji - ifumaneka lula kule nkqubo kwaye ngokoqobo nayo inotyalwe ngenjongo yokomoya.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngokwemfundiso ye-patristic ye-patristic, abantu babesemhlabeni kuphela kwimoya yabo yokomoya. Umzimba uwile kwaye unesono, ngoko ukuhlengwa kungenziwa kuphela ngokugqithisa umzimba. IThekhnoloji inika indlela kulokhu ngokuvumela umntu ukuba aphumelele kakhulu kunokuba kunokwenzeka ngokwenyama.
I-teknoloji yashicilelwa ngumfilosofi uCarolingian u-Erigena (owakha i- arte mechanicae , ubugcisa bemishini) ukuba abe yinxalenye yesabelo sokuqala sabantu esivela kuThixo kungekhona imveliso yethu yangoku. Wabhala ukuba ubugcisa "buqhagamshelana nomntu," kunye nokuhlakulela indlela yokusindiswa. " Ngomgudu kunye nokufunda, amandla ethu angaphambi kokuwa abuye aphinde abuye kwaye ngoko siya kuba sondele ekufikeleleni ekufezekeni nokuhlengwa.
Kuya kuba nzima ukugqithisa ukubaluleka kwesi shintsho. Ubugcisa bobugcisa abusekho nje into ebalulekileyo ebantwini abawileyo; Kunoko, babeye baqhelaniswa ngobuKristu kwaye batyale imali ebalulekileyo yokomoya eyokhula kuphela ngexesha.
Ukuphuhliswa kwe-millenarianism ebuKristwini kwaye kwaba nempembelelo enkulu kwonyango lwetheknoloji. Ngo-Agasti, ixesha lalingenanto kwaye ingatshintshi - irekhodi labantu abawileyo bengayi ndawo naliphi na ixesha kungekudala. Kudala, kwakungekho irekhodi elicacileyo nelibonakalayo nayiphi na inkqubela. Uphuhliso lwezobuchwepheshe lushintshile konke oku, ngokukodwa xa sele kuqatshelwa njengento ebaluleke ngokomoya. I-teknologi inokuthi, ngendlela abantu bonke babone kwaye bahlangene nesandla sokuqala, banike isiqinisekiso sokuthi uluntu lwaluphucula isikhundla sayo ebomini kwaye luphumelele kuluntu.
I-"millennium entsha" ingqiqo eyenziwe, eyenza ngokucacileyo ukusebenzisa iziqhamo zeteknoloji. Imbali yoluntu yahlulwa kwakhona kwingcamango ka-Augustine yenkathazo kunye nexesha lokulila kunye nokwenza umsebenzi osebenzayo: ukuzama ukufezekisa ukugqibelela. Kwakungabikho abantu ababekulindeleke ukuba babhekane nembali ephazamisayo. Kunoko, abantu kulindeleke ukuba basebenze ngokuzimeleyo ekuzifezeni ngokwabo-ngokukodwa ngokusebenzisa iteknoloji.
Ubuninzi bobugcisa obucwangcisiweyo kunye nolwazi lukhulile, ngakumbi kubonakala ngathi ubuntu buza kusondela ekupheleni. UChristopher Columbus , umzekelo, wayecinga ukuba ihlabathi liya kuphelisa iminyaka eyi-150 ukususela ngexesha lakhe kwaye wayezijonga njengendima ekuzalisekeni kweziprofeto zokugqibela. Wayephethe isandla kokubini kwandisa iteknoloji yolwandle kunye nokuphuhliswa kolwazi olusakhulayo kunye nokufunyanwa kwamazwekazi amasha. Bobabini babonwa ngabaninzi njengezinto ezibalulekileyo kwiindlela zokufezekisa, ngoko ke, ukuphela.
Ngale ndlela, iteknoloji yayiba yinxalenye yecandelo lobuKristu.
Ukukhanyiswa kweNzululwazi kunye neNkcazelo yeNkolo
INgilani kunye neNkanyiso yadlala indima ebalulekileyo ekuphuhliseni iteknoloji njengezinto eziphathekayo ekuthini iziphumo zokomoya. I-Soteriology (ukufundwa kwensindiso) kunye ne-eschatology (ukufundwa kwezihlandlo zokugqibela) kwakuqhelekileyo ukuxhalabisa kwiindidi ezifundwayo. Amadoda amaninzi afundayo athatha ngokungathandekiyo isiprofeto sikaDaniyeli esithi "abaninzi baya kugijimla, kwaye ulwazi luya kwandiswa" (Daniyeli 12: 4) njengophawu lokuba i-End isondele.
Imizamo yabo yokwandisa ulwazi ngehlabathi kunye nokuphucula iteknoloji yesintu yayingeyona inxalenye yenkqubo yokunyamekela ukufunda nje ngehlabathi, kodwa kunokuba isebenze ngokulindela kwi- Apocalypse . I-teknoloji yadlala indima ebalulekileyo kule ndlela njengendlela abantu bafumana ngayo amandla phezu kwehlabathi lezendalo elithembiswayo kwiGenesis kodwa umntu olahlekileyo kwi-Fall. Njengoko umbhali-mlando uCharles Webster uthi, "AbaPuritan bacinga ukuba inyathelo ngalinye ekunqobeni imvelo limela ukunyuka kwimeko yeminyaka eminyaka."
Inani elibalulekileyo ekuphuhlisweni kwezesayensi zanamhlanje ze-Western nguRoger Bacon. I-Bacon, inzululwazi kwakuthetha ngokukodwa iteknoloji kunye nobugcisa bemishini - kungekhona nayiphi na injongo ye-esoteric kodwa iinjongo ze-utilitarian. Enye inzala yakhe kukuba uMchasana-mKristu akayi kuba yedwa enezixhobo zobuchwepheshe kwiimfazwe eziza kuhlaselwa. Bacon wabhala ukuba:
Umchasi-mnye uya kusebenzisa ezi ndlela ngokukhululeka nangempumelelo, ukuze adibanise kwaye adibanise igunya leli hlabathi ... iBandla kufuneka liqwalasele umsebenzi wezo zinto ngenxa yeengozi ezizayo kwixesha lika-Anti-Antichrist ngobabalo lukaThixo kube lula ukudibana, ukuba ama-prelates kunye neenkosana zakhuthaza ukufunda nokuphanda iimfihlelo zendalo.
I-Bacon yayikholelwa, njengabanye, ukuba ulwazi lwezobuchwepheshe belilungelo lobubulo lobuntu bokuqala olwalulahlekile kwi-Fall. Ukubhala kwi- Opus Majus , wacetyisa ukuba izikhalazo zangoku zivela ngqo kwiSono Sokuqala : "Ngenxa yesono sokuqala kunye nezono ezithile zomntu, inxalenye yomfanekiso ibonakaliswe, kuba isizathu singaboni, inkumbulo ibuthathaka, kunye nokuthanda ukunyanzelwa. "
Ngoko kwi-Bacon, enye yezibane zokuqala zesayensi yolwazi, ukuphishekela ulwazi kunye neteknoloji kwakukho izizathu ezintathu: Okokuqala, ukwenzela ukuba iinzuzo zeteknoloji zingayi kuba yiphondo elichasene nomphik'ukristu; okwesibini, ukuze kuphinde aphinde amandla kunye nolwazi olulahlekileyo emva kokuwa e-Eden; kunye nesithathu, ukwenzela ukunqoba izono zangoku kunye nokufezekiswa ngokomoya.
Abazuzi beBacon kwiSayensi yesiNgesi bamlandela ngokusondeleyo kwezi njongo. Njengoko uMargaret Jacob uthi: "Phantse yonke into ebalulekileyo yesayensi yeNgesi yenkulungwane yeshumi elinesixhenxe okanye umgqugquzeli wesayensi evela kuRobert Boyle kuIsake u-Newton ukholelwa ekupheleni kwewaka leminyaka." Ukuhambelana nalokhu kwakuyiminqweno yokubuyisela ukugqibelela kukaAdam wokuqala kunye nolwazi olulahlekileyo ngokuwa.
I-Royal Society yasungulwa ngo-1660 ngenjongo yokuphucula ulwazi jikelele nolwazi olusebenzayo; Abazalwana basebenze kwimibono yokulinga kunye nobugcisa bemishini. I-Philosophically kunye nezesayensi, abasunguli babethonyelwe kakhulu nguFrancis Bacon . U-John Wilkins, umzekelo, wathi ku -Beauty of Providence ukuba ukuqhubela phambili kolwazi lwezenzululwazi kuya kuvumela abantu ukuba babuyisele kwi-Fall.
URobert Hooke wabhala ukuba iRoyal Society yayikho "ukuzama ukubuyiswa kwezobugcisa obungavumelekanga kunye nezinto ezinqwenelekayo njengoko zilahlekile." UTomas Sprat wayeqinisekile ukuba isayensi yindlela epheleleyo yokuseka "ukuhlengwa komntu." URobert Boyle wacinga ukuba oososayensi babe nolwalamano olukhethekileyo noThixo-ukuba "bazalwa njengombingeleli wendalo" kwaye ekugqibeleni "baya kuba nolwazi olukhulu kunabo bonke uThixo ngaphezu koAdam ngokwakhe."
I-Freemasons ngumzekelo othe ngqo kunye nomzekelo obalaseleyo wale nto. Kwimibhalo yamaMason, uThixo uchongiwe ngokukodwa njengengcali yezobugcisa, ngokuqhelekileyo nje ngokuba ngu "Mcebisi Omkhulu" owayephethe "iiSayensi zeLiberal, ikakhulukazi iJometri, ebhalwe kwiNtliziyo yakhe." Amalungu akhuthazwa ukuba asebenzise ubugcisa obufanayo benzululwazi nje kuphela ukubuyisela ulwazi olulahlekileyo lwama-Adam kodwa nokuba lube lufana noThixo. I-Freemasonry yayiyindlela yokuhlengwa kunye nokufezekiswa ngokutsalwa kwezesayensi kunye nobuchwepheshe.
Ilifa elithile lokuzikhethela koluntu lonke uluntu luphuhliso lobunjineli njengomsebenzi weeFree Freasons eNgilani. UAgaste Comte wabhala malunga neenjineli zendima eza kudlala kwi-humanity's reclamation yase-Eden: "ukusekwa kweklasi yeenjineli ... kuya kuthi, ngaphandle kokungabaza, yenze isixhobo esisisigxina kunye esiyimfuneko sobumbano phakathi kwabantu besayensi kunye nabathengi, I-order entsha yentlalo ingaqalisa. " UComte wacebisa ukuba, ububingeleli abatsha, baxelise abafundisi kunye nabamonki ngokulahla ukuzonwabisa kwenyama.
Kule nto kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kwiGenesis ingxelo, ukuwa kwenzeka xa uAdam noEva besitya isiqhamo esinqatshelwe kolwazi- ulwazi olulungileyo nolungendawo. Ngoko kuyimangalisa ukuba sifumana izazinzulu zikhuthaza ukunyuka kolwazi ekuphandeleni ukuphinda uphinde uphumelele. Akuyinto ephikisanayo ngokupheleleyo, kodwa yinto engqubanayo engayiboniyo isisombululo.
Inzululwazi yanamhlanje kunye nenkolo yamhlanje
Akukho nto ichazwa ngoku kude yimbali yamandulo kuba ilifa lezesayensi kunye neetheknoloji yenkolo lihlala nathi. Namhlanje, iimpembelelo zonqulo ezisekelwe ekuqhubekeni kwezobuchwepheshe zithatha iifom zimbini eziqhelekileyo: ukusebenzisa iimfundiso zonqulo ezicacileyo, ingakumbi yobuKrestu, ukuchaza isizathu sokuba i-teknoloji ifanele ilandelwe kwaye isebenzise imifanekiso yezenkolo zokungapheli kunye nokuhlengwa kususwe kwiimfundiso zenkcubeko zenkcubeko kodwa ngaphandle kokulahlekelwa yiphina into ekhuthazayo.
Umzekelo weyokuqala unokufumaneka kwindawo yokuhlaziya yendawo. Uyise we-rocketry yanamhlanje, uWerner Von Braun , wasebenzisa ubuKristu beminyaka eyi-millenarianism ukuba achaze umnqweno wakhe wokuthumela abantu endaweni. Wabhala ukuba ihlabathi "liphendukele phantsi" xa uYesu eza emhlabeni kwaye "into efanayo iya kwenzeka kwakhona namhlanje" ngokuhlola indawo. Inzululwazi ayinakuphikisana nenkolo yakhe, kodwa endaweni yoko yaqinisekisa ukuba: "Kule ndlela yokufikelela kwe-millennium entsha ngokukholwa kuYesu Kristu, inzululwazi ingaba sisixhobo esibalulekileyo kunokuba isithintelo." "Inkulungwane yeminyaka" awayeyithetha ngayo yayiyi-End Times.
Inzondelelo yenkolo yayiqhutywe kunye nezinye iinkokeli zenkqubo ye-America. UJerry Klumas, owayesekhompyutheni ye-NASA engunaphakade, wabhala ukuba ubuKristu obucacileyo buqhelekileyo kwiziko lakwaJohnson kunye nokuba ukwanda kwolwazi olwenziwe yiprogram kwakuyizaliseko yesiprofeto esichazwe ngasentla kuDaniyeli.
Bonke abadlali bamaMelika baseMelika babengamaProtestanti azinikeleyo. Kwakuqhelekile ukuba bahlanganyele kwimikhuba yonqulo okanye kwiindawo zokubuyela kwiindawo, kwaye ngokubanzi babika ukuba amava ombane wendawo aqinisekisile ukholo lwabo lonqulo. Umsebenzi wokuqala owenziwe kwinyanga usasaza emva kokufunda kwiGenesis. Ngaphambi kokuba abaphambukeli beza kuphuma enyangeni, u- Edwin Aldrin wathabatha inxube kwi-capsule-oku kwakuyilwelo lokuqala kunye nokutya kokuqala kwenyanga. Kamva wakhumbula ukuba wayejonge umhlaba "kwimeko engapheliyo" kwaye wayenethemba lokuba ukuhlola indawo kuza kubangela ukuba abantu "baphinde baphakamiswe kumyinge weengcamango zomntu."
Inzame yokuqhawula umtshato kwisingqondo somntu ibonisa enye inzame yokugqithisa imeko yomntu. Ekuqaleni, izizathu zazingamaKristu ngokucacileyo. Iintshukumo zithathwa njengomzimba njengobungqina bokuba "ukuwa" komntu kunokuba ubuthixo. Inyama yayimelene nokuqiqa kwaye yaphazamisa ingqondo yokusukela ingqondo ecocekileyo. Ngaphansi kwempembelelo yakhe, kamva ukuzama ukudala "umatshini wokucinga" waba ngumzamo wokuhlukanisa "ingqondo engapheliyo" engapheliyo kunye nenyama engapheliyo.
U-Edward Fredkin, umpostile wamandulo kunye nomphandi kwintsimi yoBuchule boBugcisa, waqiniseka ukuba ukuphuhliswa kwayo kwakuphela kwithemba lokunqongophala komntu kunye nokunyaniseka. Ngokutsho kwakhe, kwakunokwenzeka ukujonga ihlabathi "njengekhompyutheni enkulu" kwaye wayefuna ukubhala "i-algorithm yehlabathi" leyo, ukuba, xa iqhutywe ngokufanelekileyo, yayiya kubakho uxolo kunye nokuvumelana.
UMarvin Minsky, owawulathisa inkqubo ye-AI kwi-MIT, wayejonga ingqondo yomntu njengento "engumatshini wenyama" kunye nomzimba "njengengxaki yokubulala igazi." Kwakuyithemba lakhe lokufumana into engakumbi kunye nento enkulu - ezinye iindlela zokugqithisa into ebantwini bakhe. Ubomi bobuchopho kunye nomzimba, ngoluvo lwakhe, lusetshenziselwa ngokutsha ngokutsha. Xa kuziwa ebomini, kuphela " ingqondo " yinto ebalulekileyo kwaye yinto into ayefuna ukuyifumana ngeteknoloji.
Kukho iminqweno eqhelekileyo phakathi kwamalungu omphakathi we-AI ukusebenzisa imishini ukugqithisa ubomi babo: khuphela "iingqondo" zabo kwimishini kwaye mhlawumbi baphile ngonaphakade. UHan Moravec ubhale ukuba oomatshini abaneengqondo baya kunika ubuntu "ngokungafi ngokuzicwangcisa ngengqondo" kwaye oku kuya kuba "ukukhusela ekulahlekelweni kolwazi kunye nomsebenzi oyona nto ebaluleke kakhulu ekufeni."
Akukho xesha elaneleyo okanye indawo yokulungisa iindidi ezininzi zonqulo emva kwezixhobo zenyukliya okanye ubunjineli bezofuzo, ukuphuculwa kwendawo ye-intanethi kunye ne-intanethi ayikwazi ukunyanzelwa apha. Akukho mbuzo kodwa ukuba inkqubela ye-intanethi ebomini babantu ibangela impembelelo enzulu kwinkcubeko yabantu. Ingaba ungumfundi we-technophile owamkela lo okanye o-neo-luddite ochasayo, bonke bayavuma ukuba into entsha iyenzeka. Abaninzi babecala babecinga njengolu hlobo lwensindiso ngelixa ekugqibeleni bebona oku njengenye yokuwa.
Ukuba ufunda imibhalo yee-technophile ezininzi ezisebenzayo nzima ukukhuthaza ukusetyenziswa kwe-Internet, awukwazi ukunceda ukuba uhlaselwe yinto ecacileyo eyabonakalayo kumava abazama ukuwachaza. U-Karen Armstrong uye wachaza amava e-mystic yobudlelane ngokuthi "umqondo wobunye kuzo zonke izinto ... umqondo wokuxhamla kwizinto eziphambili, ezingenakwenzeka." Nangona wayenokwenkolo yemveli engqondweni, kubalulekile ukukhumbula le nkcazo njengoko sijonge ngeengxelo ezingekho zonqulo ezivela kubapostile behlabathi kwi-intanethi.
UJohn Brockman, umshicileli wedijithali nombhali, ubhale: "Ndiyintanethi. UMichael Heim, umcebisi kunye nefilosofi, ubhale: "Ukuthabatha kwethu kwiikhompyutheni ... kunzulu ngokomoya kunokusebenzisa i-utilitarian. Emva koko silingisa "imbono kaThixo", yonke into yokuba "nolwazi lukaThixo." UMichael Benedikt uyabhala: "Ukunyaniseka kukufa, ukuba sinokuthi sizulahlele umhlaba size singahambi ekhaya; bafe. "
Kwakhona, sifumana iteknoloji - intanethi - ukukhuthazwa njengendlela yokufezekisa ukudlula. Kweminye, le yinto engekho yendabuko yokuguqulwa kwenkolo yomzimba kunye nokunciphisa impahla kwi-ephemeral, indawo engabonakaliyo eyaziwa ngokuba yi "cyberpace". Kwabanye, kuyinzame yokugqithisa ukulinganiselwa kwethu size siphinde sibe nobuqu bobuqu.
Technology kunye neNkolo
Kwamanye amacandelo, sihlolisise kumbuzo wokuba ingaba isayensi kunye neteknoloji ngokwenene ayinakuhambelana nenkolo njengoko kuthethwa ngokuqhelekileyo. Andiboneli mpendulo ecacileyo apha, kodwa ndicinga ukuba ndiyidle ngokwaneleyo amanzi "obulumko bendabuko" phakathi kwabakholelwa kuThixo ukuba kukho ukungahambelani ngokupheleleyo. Kubonakala ngathi banokubambisana kakhulu ngamanye amaxesha, kwaye ngokugqithiseleyo ukuba ukusukela phambili kwezobuchwepheshe kuye kwaba yiphumo elichanekileyo lenkolo kunye neenqweno zonqulo.
Kodwa yintoni emele ixhalabele abantu abangakholwayo kunye nabangakholwayo kukuba iinjongo zezenkolo azikho ngaso sonke isikhathi inkolo ngokwemvelo-kwaye ukuba azinjalo ngokucacileyo unqulo ngokwemveli yendoda, umntu akanako ukuqonda ukunyuka kwezenkolo. Ngamanye amaxesha, umnqweno okanye ukuphakanyiswa kwentuthuko yezobuchwepheshe kuye kwabangela ukunyaniseka kwezenkolo zokudlulela abantu. Nangona iindaba zamasiko nezithethe (njengamaKristu acacileyo okubhekiselele kwi-Eden) zinokuthi ziye zawa, iinjongo zihlala zikholelwa ngokwenene, nangona oko kungasabonakali kwalabo ababandakanyekayo.
Kuzo zonke ezinye iinjongo zehlabathi zokungahambisani, nangona kunjalo, amagunya ehlabathi azuzile. Abahlali be-Benedictine babephakathi kweyokuqala ukusebenzisa iteknoloji njengesixhobo somoya, kodwa ekugqibeleni isimo sabo sasixhomekeke ekunyanisekeni kwabo kookumkani nakumapapa - kwaye ngoko umsebenzi wawunzima ukuba ngumthandazo kwaye waba yindlela yobutyebi kunye nentlawulo. UFrancis Bacon waphupha ngokuhlengwa kwetheknoloji, kodwa waphumelela ukucebisa inkundla yasebukhosini kwaye wayololoko ebeka ulawulo lwe-Eden entsha kwizandla zobukhulu kunye nezesayensi.
Umzekelo uyaqhubeka namhlanje: abaphuhlisi bezixhobo zenukliya, ukuhlola indawo kunye nolwazi lwezinto ezinokwenza izinto ezinokwenza izinto ezinokwenkolo, kunokuxhaswa yimali yenkxaso yemikhosi kunye neziphumo zokusebenza kwazo zikarhulumente ezinamandla kunokuba zininzi izinto ezinobungozi i-elite ephakamileyo yee technocrats.
Te knoloji njengeNkolo
Ubugcisa budala iingxaki; akukho nto iphikisana nale nyaniso, nangona zonke iinzame zethu zokusebenzisa iteknoloji ukuxazulula iingxaki zethu. Abantu baqhubeka bebuza ukuba kutheni ubuchwepheshe obutsha abazange basombulule iingxaki zethu kwaye bahlangabezane neemfuno zethu; mhlawumbi ngoku, sinokuyiphakamisela impendulo enokuthi ibe yincinci: ayengakaze ifuneke.
Kwabaninzi, ukuphuhliswa kobuchwephesha obutsha buye malunga nokugqithisa okufayo kunye nezinto eziphathekayo ngokupheleleyo. Xa i-ideology, inkolo, okanye iteknoloji iqhutyelwa ngenjongo yokuphunyuka imeko yomntu apho iingxaki kunye nokudumala kuyinyaniso ebomini, ngoko akufanele kube yinto emangalisayo xa iingxaki zabantu zingasombululi, xa Iimfuno azihambelani ngokupheleleyo, kwaye xa kukho iingxaki ezintsha.
Le nto yinkalo ebalulekileyo nenkolo kwaye kutheni iteknoloji ingaba yingozi - ngakumbi xa iqhutyelwa izizathu zonqulo. Andikho iLuddite kwaye andinakuphikisana nokusetyenziswa kwethekhnoloji. Kuzo zonke iingxaki esizenzayo zona, kuphela siza kukwazi ukuzisombulula - kunye ne teknoloji iya kuba yinye yemigaqo yethu ithetha. Into efunekayo ayininzi utshintsho lweendlela ngokushiya iteknoloji, kodwa utshintsho kwiingcamango ngokushiya umnqweno ongalungileyo wokugqithisa imeko yomntu kunye nokubalekela kwihlabathi.
Oku akuyi kuba lula ukwenza. Kwiminyaka emininzi edlulileyo, uphuhliso lwezobuchwepheshe lubonakala lukhunjulwa kwaye luyimfuneko. Ukusetyenziswa nokuphuhliswa kwetheknoloji kususwe kwiingxoxo zezopolitiko kunye neengcinga. Iinjongo asisayi kujongwa, nje ngeendlela. Kucatshulwa ukuba inkqubela phambili yezobuchwepheshe iza kubakhokelela ngokuzenzekelayo kuluntu oluphucukileyo-nje ngqina ubungqangi bokufaka iikhomputha ezikolweni ngaphandle kokuqwalaselwa kwindlela eza kusetyenziswa ngayo, ngaphantsi nawuphi na umzamo wokuqwalasela ngubani oza kuhlawula ochwepheshe, uphuculo, uqeqesho, kunye nokugcinwa xa kuthengwa iikhomputha. Ukubuza malunga nale nto kubonakala kungenanto - kwaye kukugqithisileyo, ukungahloneli.
Kodwa le nto yinto esingakholelwa kuyo kunye neentlanga ngokukhethekileyo kufuneka sizibuze. Uninzi lwabantu baninzi abakhuthazayo bezobugcisa. Ininzi yokufunda oku kwi-intanethi ngababalandeli abakhulu bamagunya kunye nezakhono zokubakhompyutha. Siye sayekela iinkolelo zenkcubeko zonqulo njengezizathu ezinobomi bethu, kodwa ngaba nawuphi na wethu olahlekelwa yimpembelelo ezuze ilifa ekuhambeni kwezinto zobuchwepheshe? Bangaphi abantu abangakholelwa kuThixo abaye bachithe ixesha elichasayo inkolo ngokwenene baqhutyelwa ngumbono onokwenkolo ongaqondakaliyo wokugqithisa abantu xa bekhuthaza isayensi okanye iteknoloji?
Sifanele sijonge ngokwexesha elide kwaye siphendule ngokunyanisekileyo: ngaba sibheka kwi-teknoloji ukuphepha imeko yomntu kunye nazo zonke iingxaki kunye nokudumala? Okanye ngaba sihlala sijonge ukuphucula imeko yomntu, iimpazamo nokungapheleli nangona kunjalo?
Inkolo yeThekhnoloji: Ubuntu boMntu kunye noMoya weNtsholongwane . David F. Noble.
Ukulala Ngezinto eziphangaleleyo: Ukunyuka kokungabikho kwemimoya kunye neengozi zokuzibulala . Wendy Kaminer.
IThekhnoloji, ukunyaniseka, kunye nezoMva . Ulungiswe nguYaron Ezrahi, uEvarett Mendelsohn kunye noHoward P. Segal.
I-Cyberia: Ubomi kwiiTrenches ze-Hyperspace . Douglas Rushkoff.
IiNzululwazi zangeMinyaka eliphakathi kunye neyokuQala , uMqulu II. AC Crombie.
Iimpawu zoBungqina boBungqina: Ukuziphatha kunye nomntu
I-Kitzmiller v. I-Dover, iMfazwe yezomthetho ngokuDalwa kweMpawu
Ngaba uMadalyn Murray O'Hair Wafumana Umthandazo Wesikolo?
UkuSonga iNgqapheli: iBhodi yeSebe leMfundo leNtshona Koloni v. Barnette (1943)
Iinqununu zeNkundla eziPhakamileyo kwiiNkundla zoBucala
UFriedrich Nietzsche Biography
Kuthetha ukuthini Ukuthi "Ndiyakholwa" Into Eyinyaniso?
I-1971 Case of Lemon v. Kurtzman
INKCUKACHA YOMSEBENZI WENKULUNKULU Imbali kunye neNtsapho Yomlando
UPawulos Wylie - 1992 Abantu be-Olimpiki beMifanekiso ye-Skating Silver Medalist
400 Izihloko ezibhaliweyo
Abaculi beMerengue abalulekileyo
Yakha kwiBhajethi - Iingcamango ezingakuLondoloza imali
Iingcebiso ezili-10 zokuthenga i-Acoustic Piano
Idioms usebenzisa 'Uhlobo'
Ukwesabisa, iBlitzkrieg kunye neNgaphaya - Ukubusa kwamaNazi ngaphezu kwePoland
Umthandazo kwi-Saint Dominic
Iifayili zokusebenzela zePizza
Ziziphi ezinye zeMpawu zeCompent Compounds?
Imfazwe Yehlabathi II: uMahayili oyiNtloko ye-Air Sir Sir Park
Ukuhlaselwa kwi-Fort Sumter ngo-Apreli 1861 Kwaqalisa iMfazwe yaseMelika
Abahloli beShuwa baSebenza njani?